प्रदेश समाचार | गृहपृष्ठ | Page 10
जेठ २७, धनगढी(अस) । गत विहीवार साँझ आएको हावाहुरी र वर्षाले कैलाली कञ्चनपुरमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायमा झण्डै रू. ७० करोडको क्षति पुगेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । धनगढीको चटकपुरमा रहेको पश्च...	बिस्तृतमा
जेठ २७, रसुवा । रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँ भूभागमा जाने ट्रक कन्टेनरलाई लामबद्ध तवरले आ–आफ्नो पालोमा आवतजावत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले प्रेस विज्...	बिस्तृतमा
राउटेलाई हेर्न टिकट !
on: June 10, 2019 प्रदेश समाचार, प्रदेश-कर्णाली
पंखबहादुर शाही दैलेख । कर्णालीका विभिन्न जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका लोपोन्मुख राउटे जातिलाई हेर्न शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । गत वर्ष दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले राउटेलाई परिचय पत्र प्रदा...	बिस्तृतमा
विद्युत् निकाल्ने ग्यासिफायर प्लान्ट प्रयोगविहीन
on: June 10, 2019 प्रदेश ०२, प्रदेश समाचार
दीपेश पौडेल रौतहट । रौतहटको गुजरा नगरपालिका–३ स्थित सिम्रीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने ग्यासिफायर प्लान्ट करीब ५ वर्षदेखि बन्द छ । झारपात र ससाना काठका टुक्राबाट विद्युत् निकाल्न उक्त प्लान्ट २...	बिस्तृतमा
सुकमाया थापा डोल्पा । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको निर्माण असार मसान्तसम्म पूरा हुने निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनाले बताएको छ । सो अवधिमा सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको नेपाली सेन...	बिस्तृतमा
सिन्धुली । चालू आर्थिक वर्षमा सिन्धुलीका स्थानीय तहहरूको पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । वैशाख मसान्तसम्म गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकाको बजेट खर्च दर कम देखिएको छ । बजेटको खर्च दर पनि भ...	बिस्तृतमा
जेठ २६, गते दैलेख(अस) । दैलेखमा तीन दिनदेखि विद्युत् आपूर्ति बन्द छ । विद्युत् आपुर्ति बन्द हुँदा यहाँका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयदेखि सर्वसाधारणसमेत सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । हावाहुरीस...	बिस्तृतमा
धार्मिकस्थल विष्णुपादुका जोड्न सर्दुमा पुल
जेठ २६, धरान(अस) । वर्षौंदेखि वर्षामा बजारसँग सम्बन्ध विच्छेद नै गराउने धरान जोड्ने सर्दु खोलामा २५० मिटर लम्बाईको पुलको निर्माण कार्यले तिब्रता पाएको छ । धरान ११ मंगलबारे पश्चिममा रहेको सर्...	बिस्तृतमा
जेठ २६,नेपालगञ्ज (अस) । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ गनापुरमा ६३ उद्योग स्थापना भएका छन् । केही उद्योग थपिदै छन् भने केही उद्योग जीर्ण अवस्थामा छन् । भारतको रुपैडिहा सँग सिमाना जोडिएको नेपालग...	बिस्तृतमा
१७ वर्षपछि धावनमार्गमा कालोपत्र
जेठ २६, रत्ननगर(भरतपुर) । बजेट अभावले लामो समयदेखि रोकिएको भरतपुर विमानस्थलको धवनमार्गमा कालोपत्र थप्ने काम शुरु भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्रधिकरणले उक्त विमानस्थललाई रू.९ करोड उपलब्ध गर...	बिस्तृतमा